शब्द "छुट्टी" पहिले नै एउटा मुस्कान कारण छ! जो मजा छ प्यार गर्दैन, उपहार प्राप्त गर्न? गल्ती गर्ने विश्वास जनवरी मा - सबैभन्दा उत्सव महिना। जो अझै पनि बिदा छ फेब्रुअरी मा fatherland दिन को डिफेन्डर वाहेक, मा? हो, एक पुरा शस्त्रागार: चर्च, छोराछोरी, व्यावसायिक। हामीलाई अझ विस्तृत जाँचौं।
उज्ज्वल पवित्र दिन
धार्मिक मानिसहरू हृदय द्वारा फेब्रुअरी सबै अर्थोडक्स बिदा थाहा छ। तिनीहरूले सानो छैन। महिना सेन्ट Macarius महान् सम्झनामा दिन सुरु। जाडो अन्तिम महिनाको पहिलो दिन, हामी जसले परमेश्वरको कुरा रूपमा, उजाडस्थानमा 60 वर्ष बिताए पनि Monk, को स्मृति आदर गर्छन्। उहाँले गाह्रो जीवन परिस्थितिमा भएका मानिसहरूको धेरै सुरक्षित गरियो। आफ्नो मार्फत प्रार्थना निको मान्छे धेरै। दिन दिन चिन्ह Yefim, Arseny, Anton, Feodosiya नाम।
फरवरी6- पीटर्सबर्ग को Xenia दिन। यो पवित्र महिलाले 18 औं शताब्दीमा जन्म भएको थियो। सुखी विवाह रमाइलो गर्न समय भएको छैन, त्यो 26 वर्ष को लागि एक विधवा रह्यो। त्यो गरिब आफ्नो सबै बचत र सम्पत्ति वितरण, उहाँले एक Muzhev सुट मा रह्यो। Xenia दिउँसो प्रार्थना र अरूको आनन्द बारेमा प्रभु सोधेर, स्मोलेन्स्क चिहान र क्षेत्रमा खर्च चिसो रात नजिकै एक मन्दिर निर्माण गर्न इँटा तान्नुभयो।
प्रमुख धार्मिक बिदा फेब्रुअरी - प्रभुको एक प्रस्तुति र परमेश्वरको आमा को औबेरियन चिह्न को सम्मान मा उत्सव।
फेब्रुअरी 15 सबैभन्दा पुरानो मसीही छुट्टी - प्रभुको प्रस्तुति। परमेश्वरको पवित्र आमा हल्का आवश्यक थिएन, तर मन्दिरमा बच्चालाई येशूले ल्याए। त्यहाँ उनले पुरानो मानिस शिमोन, कि उहाँले परमेश्वरको दूत को हात मा पकड छैन गर्दा, मर्न छैन थाह जो भेट!
फेब्रुअरी 25 - उपासनाको दिन परमेश्वरको आमा को औबेरियन चिह्न को। यो क्रिस्चियन धर्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुहारहरू को छ। विश्वासीले गरेको विधवाले heretics देखि प्रतिमा लुकेको र पानी मा उनको पुल निर्णय गरेको थियो। तल Rowed नदी स्थितिमा प्रतिमा Accommodation लातविया Accommodation गर्न रवाना र त्यहाँ त्यो औबेरियन को विहारको भिक्षुहरूले फेला परेन।
अझै पनि अर्थोडक्स स्मृति फेडोरा Stratilata, फेब्रुअरी 25 आदर, पवित्र Martyr Tryphon Apomeyskogo को मठ दिन रूपमा, फेब्रुअरी बिदा छन्, चर्च र सम्पूर्ण अर्थोडक्स विश्व सम्झना सेन्ट एलेक्सिस। पछिल्लो, अशान्ति, राजाको contentions pacify मदत एक पाकेको बुढेसकालमा गर्न बस्थे।
सबै ट्रेडों महत्त्वपूर्ण छन्
प्रत्येक पेशामा यसको आफ्नै महत्वपूर्ण दिन, जन्मदिन पार्टी एक प्रकारको छ। फेब्रुअरी, के बिदा तपाईं विशेष थप थाहा? यो यस महिना मा धेरै छन् कि बाहिर जान्छ:
फेब्रुअरी 10 मा, रूस कूटनीतिक सेवा दिन celebrates। मान्छे को विवरण तल्लीन छैन विचारमा यो काम गर्दैन, र स्थिर सामाजिक घटनाहरू र receptions। निस्सन्देह, यो भ्रामक छ। कूटनीतिज्ञ - धेरै गाह्रो पेशा धैर्य र उच्च बुद्धि आवश्यक छ। आखिर, कहिलेकाहीं यी मानिसहरू देश को भाग्य र यसका सबै बासिन्दाहरू निर्धारण गर्नेछ। यस कूटनीतिक सेवा एक कर्मचारी - अत्यधिक कुशल पेशेवर राज्य को, तर पनि संसारभरिका मात्र होइन इतिहास चिन्ने। यसैले मान्छे एक छ सोचाइ, बाटो जिम्मेवारी, छिटो र सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता!
रूस मा फेब्रुअरी बिदाहरू धेरै विविध छ। उदाहरणका लागि, दिन सैन्य topographer। 1822 मा, यो रूस मा सर्वेयर लागि पहिलो विद्यालय खोलियो। यसलाई जहाँ वास्तविक विशेषज्ञहरु जारी सैन्य-स्थलाकृतिक स्कूल, थियो! अब नयाँ प्रविधिको आगमन संग यो सर्वेयर को जटिल काम हो। व्यवसायी उपग्रहहरु संग व्यवहार, साधन सबै सही र परिष्कृत, लेजर, अप्टिकल। यी मानिसहरूलाई जिम्मेवारी विशाल छ!
फेब्रुअरी 14 मा मात्र प्रणय दिवस लागि जानिन्छ! यो दिन मा, कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूले आफ्नो छुट्टी मनाउन। यी शानदार मान्छे, यो बाहिर जान्छ, बस एक मनिटर र मजा टाढा वर्ष!
फेब्रुअरी9- दन्त चिकित्सक को दिन, हाम्रो देशमा कलिलो तिहार। यो एक छुट्टी छैन। तपाईंको आफ्नै दन्त चिकित्सक बधाई यो सम्बन्ध बिगार्छ छैन राम्रो छ यस्तो मान्छे संग कुनै सिफारिस गरिएको छ!
फेब्रुअरी व्यावसायिक बिदा विभिन्न मारा: को bartender दिन, इन्धन सेवा दिन, परिवहन प्रहरी कर्मचारीहरु को दिन ... पुरा महिना, तपाईं मित्र र परिचितहरू बधाई सक्नुहुन्छ, मुख्य कुरा - भङ्ग जाने छैन!
त्यहाँ विशेषता हुन सक्ने केही दिन राष्ट्रिय बिदा फेब्रुअरी। फेब्रुअरी आठौं दिन आधिकारिक 1999 मा विज्ञान को दिन तोकेका थिए। हाम्रो देश यस क्षेत्रमा को घमण्ड केही छ। सबैभन्दा ठूलो आविष्कारहरू र विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू, रूस मा जन्म, - हाम्रो गर्व, दिन मा देश को ठूलो मन को स्मृति सम्मान!
स्मारक दिन रूप Pushkin फरवरी को 10 औं मनाइन्छ। यी महान पुरुष को मृत्यु को दिन किनभने के बिदा, छैन भन्न सकिन्छ मजा। प्रतिभाशाली रूसी कवि, 1937 मा मृत्यु भएको हिउँदमा। हामी सबै हृदय तिनीहरूलाई गर्न जोडेको लाइन थाहा छ।
फेब्रुअरी 21 मा, देश celebrates आमा भाषा दिन! यो छुट्टी - अन्तर्राष्ट्रिय। संसारमा बारेमा छ हजार भाषा छन्, र प्रत्येक यस दिन revered छ। सिक्न र आफ्नो भाषा आनन्द! अझ राम्रो - धेरै, यो मानसिक गतिविधि र स्मृति को विकास गर्न योगदान पुग्छ।
सबै प्यानकेकहरू मनपर्ने
रूस मा आफ्नै राम्रो मा फेब्रुअरी सबै बिदा, तर Mardi Gras - सबैभन्दा स्वादिष्ट! यो प्राचीन स्लाव भाषाहरु छुट्टी, वसन्त को एक उत्सव प्रस्तुत। सूर्य को प्रतीक स्वादिष्ट प्यानकेकहरू छन्। मह, मासु, गाढा दूध, जाम: तपाईं भर्ने सबै प्रकारका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सप्ताह तपाईं प्यानकेकहरू मा भोजमा आवश्यक र आइतबार, र एक effigy escorted जाडो बाल्न! यो दिन भनिन्छ "क्षमा आइतवार", तपाईंले गत वर्ष गरेको wrongs लागि लागू सबै परिवार देखि क्षमा माग्नुपर्छ।
धेरै हास्यास्पद Shrovetide पर्वहरू फेब्रुअरी ठाउँ लिन। के बिदा अझै पनि अवस्थित गर्छन्?
सबै भन्दा राम्रो - केटाकेटीलाई
फेब्रुअरी छोराछोरीको बिदा, दुर्भाग्य, कुनै। तर यी दिन को कुनै पनि बच्चाहरु को लागि समर्पित गर्न सकिन्छ। Mardi Gras - मनपर्ने विचरण बच्चाहरु। सबै सप्ताह तिनीहरूले प्यानकेकहरू overeat, र त्यसपछि एक effigy कसरी बाल्न हेर्न खुसी हुन!
प्रणय दिवस - आफ्नो साझेदार आफ्नो भावना व्यक्त गर्न एक उत्कृष्ट मौका। सुन्दर आश्चर्य, सुरुचिपूर्ण मायालाई bouquets, चकलेट - कि प्रणय दिवस को सबै युक्तिहरूको छ!
त्यहाँ धेरै थिए अघि प्रेम को भोज, मूर्तिपूजक पटक देखि ज्ञात। तर यो दिन म मात्र यो पुग्यो - 14 फेब्रुअरी मा। प्रत्येक दम्पती फेब्रुअरी यो दिन को लागि प्रतीक्षामा छ। के बिदा अझै पनि बिस्तारै र कोमलतासाथ रूपमा मनाइन्छ? शायद, यी कुनै छन्!
यो उत्सव को दोषी नही - पुजारी प्रणय। सम्राट क्लौडियसको शासनकालमा यो कि सिपाहीहरूले पत्नीहरूका लागि तिर्सना सबै शक्ति लड्न छैन विश्वास गरे। त्यसपछि उहाँले विवाह गर्न forbade। तर दयालु र बुझ्न पुजारी प्रणय गोप्य प्रेमीहरूको विवाह गरे। सबै गोप्य कहिल्यै स्पष्ट हुन्छ, र सम्राट मृत्यु गर्न offender सजाय सुनाई। मायालाई पनि वार्डेन छोरी संग प्रेम गरे, र प्रेमको आसन्न मृत्यु लिखित घोषणा अघि आफ्नो प्रिय गर्न। सन्देशको अन्त्यमा "तपाईंको प्रेमी।" हस्ताक्षर भएको थियो प्यारा प्रेम टिप्पणीहरू र तथाकथित Valentines। विशेष गरी, कार्डहरू बेशकीमती तिनीहरूले प्राण भाग निवेश किनभने, तपाईंको आफ्नै हातले बनाएको!
दया दुनिया सुरक्षित हुनेछ
दयाको स्वभाविक प्रेरित दिन फेब्रुअरी 17 मा मनाइन्छ, तर यो बारेमा, केही मान्छे थाहा छ। Initiators - परोपकार। तिनीहरूले मानिसहरूलाई मदत र संसारको राम्रो बनाउन मौका कल छन्। दयाको स्वभाविक गेस्चर जानबूझकर कार्य भन्दा धेरै मूल्यवान छ। बिहान उठ अनि तपाईं आज कम्तिमा एक व्यक्ति, एक बिरामी बच्चा मदत गर्न सक्छ बाहिर आंकडा। र सबैलाई आवश्यकता आफ्नो महत्त्व थाह छ भने धेरै कम हुनेछ।
हाम्रो सेना बलियो छ
सायद फरवरी मा सबै भन्दा लोकप्रिय छुट्टी को fatherland दिन को डिफेन्डर छ। यो मा, हरेक परिवार मा मनाइन्छ कि त्यहाँ युद्ध छ बिना वा छैन। पहिले, यो छुट्टी लाल सेना को दिन भनिन्थ्यो, र पछि उहाँले मानिसहरूको सबै दिन विचार गर्न थाले। यो दिन वृद्धहरुको आदर मा सम्झना गर्न र सैन्य गुण को स्मारक मा फूल राखे।
प्रत्येक उत्सव यसको आफ्नै विशेषताहरु र परम्परा छ। तिनीहरूले पनि, पुर्खाहरूको र आधुनिक मानिसहरूलाई जीवन को peculiarities थाह थियो भनेर तपाईं रूसी बिदा थाहा र छोराछोरीलाई बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कफी को (17 अप्रिल)। कफी दिवस रूस मा
कसरी फूलदान मा lilacs राख्न? रहस्य फूलहरु र अनुभवी माली
एक कर्पोरेट ब्लग शुरू लागि दस मुख्य कारण।
कप्तान ब्रिटेन गर्ने हो?
स्कूटर "Tulitsa" - को स्कूटर को पुर्खा
मानव आवाज हड्डी जोड्ने तन्तु